बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ? - Nepali in Australia
July 1, 2021 autherLeaveaComment on बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ?
चितवन, १७ असार – खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १ वेल्सीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पसेर क्षति पु-याएको छ । कयर खोलाले उद्योगमा क्षति पु-याएको हो । उद्योगका निर्देशक बिमल कालाखेतीका अनुसार त्यहाँका धरै सिलिण्डर वगाएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुगेका छन् ।”वाढीले उद्योगको संरचनामा नोक्सान पु-याएको छ । उद्योगमा १० देखि १५ हजार सिलिण्डर रहन्छ ।